ကျေးလက်တောတန်း - ထွဏ်းခမ်
ဒီနေ့ရင်မှာ လာငြိနေတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်က ချင်းအဆိုတော် ထွဏ်းခမ်းရဲ့ “ကျေးလက်တောတန်း” သီချင်းလေးပါ။
ဒီနေ့လာငြိတယ်ဆိုတာ ဒီသီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခုရေးချလိုက်ဖို့ ငြိတာကို ပြောတာပါ။ ဒီသီချင်း ရင်မှာငြိတွယ်ခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု မကတော့ဘူးထင်ရဲ့။
ဒီသီချင်းကို တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ အိမ်ကနေ တစ်ယောက်တည်း ကျောင်းတတ်ဖို့ထွက်လာပြီး ၃ နှစ်လောက် အကြာမှာ တိုက်ခန်းကို လာလည်ရင်း ဂစ်တာတီးကြတဲ့ ရှမ်းသူငယ်ချင်းတွေဆိုကြတာကို ပထမဆုံးစကြားဖူးပြီးမှ သီချင်းခွေကို နောက်မှ နားထောင်ရတာပါ။
ထွဏ်းခမ်ရဲ့ ပထမဆုံးခွေ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်Albumထဲမှာ သီချင်းတော်တော်များများဟာ ရင်ကို ထိစရာသီချင်းတွေချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုပြောမယ့် သီချင်းကတော့ ကျမနှလုံးသားကို အထိရှဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမမှမဟုတ်ဘူး ကျမလို တောင်ပေါ်ဒေသကို ခွဲပြီး မြေပြန့်မှာလာနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတော်တော်များများရဲ့ နှလုံးသားကို ရိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
ကိုထွဏ်းခမ်ကတော့ သူ့ရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိမြေ ချင်းတောင်တန်းတွေကို မြင်ယောင်ရေးဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် ဒါမှမဟုတ် ချင်းတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာ ရေးဖွဲ့ခဲ့တာ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန် အဲဒီအရွယ်က ကျမချင်းတောင်တန်းကို မတွေ့ဖူး၊ မခံစားဖူးလေတော့ ကျမသိတဲ့ ရှမ်းတောင်တန်းတွေနဲ့ အစားထိုးခံစားပြီး ဒီသီချင်းကို နှစ်သက်စွဲလမ်းခဲ့ပါတယ်။
အခုဒီစာကို ရေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျမ ချင်းတောင်တန်းတွေရဲ့ အလှကို သိရှိပြီးသား ခံစားဖူးပြီးသား အချိန်ဖြစ်နေပါပြီ။ သီချင်းထဲက “တောင်ပေါ် အမေ့ရဲ့ ထမင်းနဲ့ ဟင်း” ဆိုတဲ့ ချင်းရိုးရာ အစားအစာဖြစ်တဲ့ ပြာဟင်း၊ ဆာဗူးသီး၊ နွားနောက်သားတို့ရဲ့ အရသာတွေကို ကျမခံစားဖူးပြီးပါပြီ။
ဒီသီချင်းကို မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး နားထောင်လိုက်ရင် သီချင်းကို ဖွင့်ထားပေးတဲ့ ချင်းရိုးရာပုလွေသံလေးဟာ တိမ်တွေလွင့်မျောနေတဲ့၊ ရံဖန်ရံခါ တိမ်တိုက်တွေ ကိုယ့်အိပ်ခန်းပြတင်းပေါက်ကနေ ကိုယ့်အိပ်ယာဆီကို ၀င်လာတဲ့၊ တခါတစ်ခါ တောင်ပေါ်လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်စီးနေရင်၊ လမ်းလျှောက်နေရင် ကိုယ့်အောက်မှာ တိမ်တိုက်တွေဖြတ်စီးနေတဲ့၊ တောင်ပေါ်လမ်းမှာ သွားနေရင်း တိမ်တွေကြားထဲ ရောက်သွားလို့ အိမ်မက်ကမ္ဘာထဲရောက်သွားသလိုဖြစ်သွားတတ်တဲ့ ချင်းတောင်တန်းတွေဆီ ကျမကို ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ အိမ်မက်တစ်ခုမက်ရသလို မျော်လွင့်သွားလို့ ….
ပုလွေသံအဆုံးမှာ ဂစ်တာ Plugging ခပ်သံလေးက အိမ်မက်မက်နေရာက လှုပ်နှိုးလိုက်တဲ့ Alarm သံတစ်ခုလို လက်တွေ့ဘ၀ကို ပြန်ခေါ်လိုက်သလို သာသာယာယာလေးပေမယ့် သာယာတဲ့ အိမ်မက်တစ်ခုကို ကြားဖြတ်ဝင်လာတဲ့ သံစဉ်တစ်ခုလို ၀င်လာတယ်။ ချင်းတောင်တန်းတွေပေါ်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ စိတ်အလျင်ဟာ ဂစ်တာPluggingသံကြောင့် ကိုယ့်နေရာကို ကိုယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ရောက်လာပြီး Drum ခေါက်သံတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တောင်တန်းပေါ်မှာ မဟုတ်ပဲ မြို့ပြမှာပါလားဆိုတာကို ထွဏ်းခမ်ရဲ့ သီချင်းသံကြောင့် သိလိုက်ရပါတယ်။
ရှာဖွေကြိုးစား ဘ၀အတွက် ပြေးလွားနေရင်း
အကြိမ်ကြိမ်လဲကျ ရှုံးနှိမ့်မောပန်းလို့ နွမ်းနယ်
ငြိမ်သက်နွေးထွေးဘ၀ရဲ့ အရိပ်ကို ကျနော်တမ်းတ အိုး အိုးးး
မြို့ပြညရဲ့ လမ်းမတွေပေါ် ဒါဏ်ရာများနဲ့ တိုက်ခိုက် အသည်းကွဲချိန်မှာ
ယုံကြည်ခြင်းများ အားနည်းပျောက်ဆုံး ဘ၀မီးအိမ်
ကြယ်ရောင်မလင်းတဲ့ ဘ၀ရဲ့ ညတွေ ခံစားရင်း လမ်းပျောက်နေဆဲ>>
တောင်ပေါ်ကနေ အောင်မြင်မှုတွေကို မှန်းဆလို့ ဆင်းလာတဲ့ တောင်ပေါ်သားတွေ မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုကြားမှာ အကြိမ်ကြိမ် ရှုံးနိမ့်တာတွေ၊ မောပန်းမှုတွေ၊ အသည်းကွဲတာတွေ၊ တစ်ခါတစ်ခါ အရှုံးပေးလိုက်ချင်တာတွေ၊ မြို့ပြမှာ မလင်းတဲ့ ကြယ်တွေ၊ အေးဆေးငြိမ်သက်တဲ့ တောင်ပေါ်ဘ၀ဆီ ပြန်ပြေးသွားချင်တာတွေ အရသာစုံအောင်ကို ထည့်ပေးသွားပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ ရှုံးတဲ့ဒါဏ်၊ အဆင်မပြေတဲ့ ဒါဏ်ကို ဒူပေတာပေ တော်တော်ခံနိုင်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် ဒီသီချင်းကို စကြားဖူးတဲ့အချိန်မှာ အတွေ့အကြုံက နု၊ စိတ်ဓါတ်က နုတော့ ဒီစာပိုဒ်လေးဟာ ငါ့အတွက်ရေးထားတာပဲလို့တောင် ခံစားခဲ့ဖူးတယ်။
UFL မှာ စာမရတာတွေ၊ စာမေးပွဲကျတာတွေ၊ ပြည်လမ်းမှာ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ လမ်းလျှောက်တာတွေ၊ Bus ကားကျပ်တာတွေ၊ အသည်းကွဲတာတွေ၊ အသည်းခွဲတာတွေ၊ မြို့ပြမီးရောင်ကြောင့် မိုးပေါ်ဘယ်လောက် မော့်ကြည့်ကြည့် ချစ်တဲ့ ကြယ်လေးတွေကို မတွေ့ရတာတွေ အဲဒီအရွယ်က ဘ၀အတွက် တော်တော်ကြီးတဲ့ အခက်အခဲတွေပေါ့။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာပြီး အဲဒီအကြောင်းတွေကို ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ ငါတော်တော် မရင့်ကျက်ခဲ့ပါလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ အဲဒီအရွယ်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ် အဟုတ်ကြီးထင်ခဲ့တာပေါ့။ ငါ့လောက်တော် ငါ့လောက် တတ်တဲ့သူမရှိဘူး။ ငါလုပ်ရင် အောင်မြင်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အမေ့အေးရိပ်ကခွါ မြို့ပြမှာ တစ်ယောက်တည်းမပြောနဲ့ တစ်ပိုင်းထဲလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ မွေးရပ်မြေကို ခြေစုံကန်ခဲ့တာ။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက အခုချိန်ထိ မွေးရပ်မြေကို ပြန်ပြန်တမ်းတမိနေဆဲ <<ငြိမ်သက်နွေးထွေးဘ၀ရဲ့ အရိပ်ကို ကျနော်တမ်းတ ….. အိုး … အိုး….>>
<< ဒီလို မြို့ပြဘ၀က အဆင့်မြင့်ပါတယ်
ဒါပေမယ့်လည်း ကျနော့်ရဲ့ အသွေးအသားက တောင်းဆို
တောင်ပေါ်အမေ့ရဲ့ ထမင်းနဲ့ဟင်းကို ကျနော်တမ်းတ … ရေး….
တောတန်းများရဲ့ အရိပ်ကို မျှော်ကြည့်ရင်း… မျှော်ကြည့်ရင်း
ဟိုအဝေးက မိုးသား တိမ်တိုက်များရဲ့ အောက်
ဘယ်အခါ ပြောင်းလဲမသွားတဲ့ ဒို့ရဲ့နေရာ
နွေမိုးဆောင်းပြောင်းလဲ တောင်တန်းများရဲ့ ကြား
တသွင်သွင် စီးဆင်းသွားတဲ့ စမ်းချောင်းများ ……
ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး ဘာနဲ့မှ မလဲဘူး
အကြိမ်ကြိမ် လွမ်းမောရင်းနဲ့ မေ့မရဘူး…. >>
<<ဒီလို မြို့ပြဘ၀က အဆင့်မြင့်ပါတယ်
တောင်ပေါ်အမေ့ရဲ့ ထမင်းနဲ့ဟင်းကို ကျနော်တမ်းတ … ရေး….>> ရှမ်းတောင်ကိုပဲ သိခဲ့တုန်းကတော့ မြို့ပြဘ၀ အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ကျမထဲထဲဝင်ဝင်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ အခုတော့ ချင်းတောင်ပေါ်မှာ ဆန်မရှိလို့ ပြောင်းဖူးကို တစ်ရက်လုံးထောင်း၊ တစ်ရက်လုံး တစ်စေ့ခြင်းနီးပါးထုပြီး ပြန်ပြုတ်စားရတာ တဲ့သူတွေကို တွေ့ဖူးခဲ့ပြီ။ သုံးဖို့ရေတစ်ပုံးအတွက်ကို နေထိုင်တဲ့တောင်ပေါ်ကနေ စမ်းချောင်းရှိတဲ့ တောင်အောက်အထိ လမ်းလျှောက်သွားခပ်ရတာတွေ သိခဲ့ပြီ။ အပူချိန် အနှုတ်ဒီဂရီရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ Heater သုံးဖို့နေနေသာသာ အနွေးထည်တောင် ၀တ်ရဖို့မလွယ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို တွေ့ခဲ့ပြီ။ Heater လို့သာထည့်ပြောတာပါ လျှပ်စစ်မီးတောင် မရှိဘူး။ အိမ်ဆောက်ဖို့ မြေပြန့်ရှားပါးလွန်းတော့ တတ်နိုင်သူကတော့ မြေလေးညှိလို့ အိမ်ဆောက်၊ အများစုကတော့ ခြေတံရှည်အိမ်တွေကို လမ်းပေါ်မေးတင်ပြီး ဆောက်ထားတယ်။ အိမ်ရှေ့က လမ်းနဲ့ အတိဖြစ်ပေမယ့် အိမ်အနောက်ကတော့ လေထဲမှာပျံလို့။ ချင်းတောင်တန်းပေါ်က အိမ်လေးတွေဟာ အောက်ကနေကြည့်လိုက်တိုင်း အိမ်လေးတွေက လေထဲဝဲပြီး တိမ်ထဲဝင်နေတယ်။
ကြည့်လို့အရမ်းလှပေမယ့် နေထိုင်လို့တော့ မြို့ပြလို သက်တောင့် သက်သာမဖြစ်လှဘူး။ အေးတယ်။ လေတိုက်တယ်။ မီးမရှိဘူး။ အစားအသောက် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး။ ညနက်သန်းခေါင် ဗိုက်ဆာလို့ ခေါက်ဆွဲထုတ်လေး ပြုတ်စားချင်ရင်တောင် မီးသွေးမီးဖိုကို အစကနေ ပြန်မွေးပေတော့ပဲ။
တစ်နှစ်လုံးအတွက် စားစရာ ပြောင်းဖူးတွေကို အိမ်တွေမှာ သိုလှောင်ထားရတယ်။ သီးပင်စားပင်စိုက်ဖို့ မြေနေရာကလည်း ရှားပါးလွန်းတယ်။
အဲဒီလို အစစအရာရာက မြို့ပြနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ခက်ခဲပေမယ့်လည်း တောင်ပေါ်က အစားအစားကိုပဲ အသွေးအသားထဲကနေ တမ်းတနေမိတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ကျမလိုက်ခံစားလို့ရတယ်။
အဲဒီတောင်ပေါ်က အစာတွေဟာ Fast food တွေလို ခပ်ပျယ်ပျယ်အရသာမဟုတ်ဘူး။ အာဟာရအပြည့် အရသာအပြည့်ရှိတယ်။ ငှက်ပျော်ဖက်ထဲထည့်စားရတဲ့ ထမင်းနဲ့ ဟင်းရဲ့ အရသာနဲ့ သင်းရနံ့ကို မြို့ပြကလူတွေ သိမှာမဟုတ်ဘူး။ (သူတို့က ကြွတ်ကြွတ်အိပ်လောက်သိတာ)
တောင်ပေါ်ထင်းရှူးရနံ့လေး ရှုရှိက်ချင်တယ်။ >> ပန်းရောင်ချယ်ရီပွင့်လေးတွေရယ်။ သူတို့က ရနံ့ မသင်းပျံလှဘူး။ အဲဒီတော့ ထင်းရှူရနံ့လေးကိုပဲ တောင်ပေါ်သားလေး လွမ်းရတာပေါ့။ ဒီနေရာမှာ ဘာကြောင့်များသူ တောင်ဇလပ်ပန်းကို ထည့်ပြီး မရေးဖွဲ့ခဲ့လဲ ကျမမသိဘူး။ တကယ်တော့ တောင်ဇလပ်ပန်းလေးတွေကမှ သူ့မွေးရပ်မြေရဲ့ ပုံရိပ်အစစ်။ ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာ မရှိဘူး။ ချယ်ရီနဲ့ ထင်းရှူးပါလေတော့ ကျမတို့ ရှမ်းတောင်ပေါ်ကလူတွေကလည်း ကိုယ့်တောင်ကိုယ် လွမ်းကြတာပေါ့လေ။
မြို့ပြမှာသာ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန်တောင် မတူအောင် အဆောက်အဦ အသစ်တွေ၊ နည်းပညာအသစ်တွေ လိမ့်ဝင်နေပေမယ့်၊ ချင်းတောင်တန်းတွေကတော့ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် အရမ်းကွာခြား ပြောင်းလဲမှုနည်းပါတယ်။ နွေနွေ မိုးမိုး ဆောင်းဆောင်း အေးတာက အေးတာပဲ။ လူတွေကလည်း ရိုးသားတာက ရိုးသားတာပဲ။ ကြည်လင်လင် ရေလေးတွေ စီးနေတဲ့ စမ်းချောင်းလေးတွေလည်း စီးမြဲစီးနေတာပဲ။ အစပိုင်းမှာ ရေးခဲ့သလို တိမ်တိုက်တွေကလည်း အိပ်ခန်းထဲ ၀င်လာမြဲဝင်တာတာပဲ။ ကိုယ့်အောက်မှာ တိမ်တိုက်ကြီးတွေလည်း ရှိနေတတ်တာပဲ။ တစ်ခါတစ်ခါ နတ်ပြည်ရောက်နေသလိုလို၊ အိပ်မက်ထဲလမ်းလျှောက်ရသလိုလို တိမ်တွေကြားထဲ လျှောက်သွားလို့ရတာပဲ။ ကိုယ့်ပတ်ဝင်းကျင် လေးငါးပေလောက်တောင်မှ မှုန်ဝါးဝါးဖြစ်လို့။
ဒီလိုမြို့ပြမှာ ဖန်တီးယူလို့မရတဲ့ အရာတွေကို <<ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး။ ဘာနဲ့မှ မလဲဘူး>> လို့ သူပြောတာ သဘာဝကျတာထက် ကျလွန်းပါတယ်။
ကားသံတွေ၊ လူသံတွေ ဆူညံပွတ်နေတဲ့ မြို့ပြကနေ သာယာတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသကို ဘယ်တော့မှများ ပြန်ရလိမ့်မလဲလို့ တမ်းတ လွမ်းမောရတာလည်း သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်မှုကို လိုချင်လွန်းလို့ စွန့်စားပြီး မွေးရပ်ကို စွန့်လာတဲ့သူတွေ အောင်မြင်မှုမရသေးပဲ အိမ်ပြန်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ ဘယ်တော့မှများ အိမ်ကို ပြန်ရပါ့မလဲလို့ မွေးရပ်မြေနဲ့ ခွဲရသူတိုင်း တမ်းတလွမ်းဆွတ်မိမှာ မလွဲပါဘူး။
<<<<ရင်ထဲမှာလွမ်းလို့ အရောက်ပြန်လာမယ်…….. >>>>>>
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိတဲ့နေရာကိုတော့ အရောက်ပြန်ကြမှာပါ… ပြန်မယ်လို့လဲ ဆုံးဖြတ်ထားကြမှာပါပဲ။
အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့သူတွေအတွက် သီချင်းတွေထဲက ချစ်စရာသီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ…
မြကန်သာ အိမ်ယာ၊ ရန်ကုန်။
၁၂း၅၀ AM၊ ၁၆ရက် မတ်လ ၂၀၁၅
For Download the song
Posted by Étoile at 7:37 PM
လက်တွဲပြီး တူတူသွားဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား…
ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့တော့ နင်ရဲ့ အဝေးက အားပေးမှုနဲ့တင် လုံလောက်တာထက် ပိုလျှံနေပါပြီ သူငယ်ချင်းဟောင်းလေးရေ…
ဆောင်းမယ်လို့ ကြံရွယ်ထားတဲ့ ထီးကလေးလည်း တံခါးထောင့်လေးမှာ အိပ်စက်လို့…..
၁၅ရက် မတ်လ ၂၀၁၅ (၁၁း၃၀ AM)
ပန်းတိုင်ကို သွားဖို့ အင်အားကို
ထီးတစ်ချောင်းက တံခါးထောင့်မှာ အိပ်စက်
Posted by Étoile at 11:30 AM
Labels: ကဗျာ, တိမ်တွေဖုံးတဲ့လ